Dungeons 3: ciyaar fiidiyoow weyn oo imaanaysa Linux | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | GNU / Linux, Ciyaaraha
Qaar badan ayaa laga yaabaa inay si fiican u xusuustaan ciyaarta fiidiyow ee Dungeon Keeper, ciyaar fiidiyoow ah oo aad ahayd "ninka xun" waana inaad la dagaallanto geesiyaal. Dhex dhig gododyada iyo awood u lahaanshaha wax ka qabashada dhammaan noocyada xayawaannada sharka ah, waxay ahayd istiraatiijiyad fiidiyow oo fiidiyoow ah oo aad ku maamuli lahayd boqortooyadaada sharka ah si aad u guuleysato una gudubto heerarka xiga ee ololaha, intaad heleyso xayawaan cusub oo aad ka soo kacayso heerka dhaliishaada si aad u horumariso.
Hagaag, ka dib sagaalkaas waxaa yimid mid kale oo loo yaqaan Dungeons kaas oo raacaya bilicsanaanta godadka Dungeon Keeper iyo waxyaabo kale oo la mid ah Hadda nooca Dungeons 3 ayaa sidoo kale loo heli karaa Linux. Iyo waxa fiican, xirmo cusub ayaa imaan doonta oo loo yaqaan 'Golden Pickaxe Event' oo gaari doona Linux, Mac iyo Windows. Waad ku mahadsan tahay Kalypso Media iyo horumariyeyaasha Istuudiyaha Realmforge.
Waa a DLC, taasi waa, nuxur la soo dejin karo si loo ballaariyo cinwaanka Dungeon 3. Waxaad ku heli doontaa iyada oo loo marayo Steam, halkaasna waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad dheeri ah hadaadan wali aqoon. Sida Dhacdada Dahabka ah ee 'Pickaxe Event', waxay soo bandhigaysaa loolan cusub oo lagu raadinayo hanti qarsoon. Kale oo dheeraad ah oo bilaash ah oo cusub oo istiraatiijiyad ah iyo jilitaanka maareynta godka godka. Waxaad u baahan doontaa inaad soo ururiso xoogaa dahabi ah oo dahsoon si aad u furto astaamo cusub.
Ciyaartoyda sidoo kale waxaa lagu abaalmarin doonaa wax dheeri ah qofkii awooda inuu helo dhammaan baalasha dahabka ah. Waxaa lagu xantaa in abaalmarinta gunnada ugu dambeysa ay kugu xiri doonto adduun kale oo fog, laakiin weli xog badan ma hayaan, waxaa jira wax qarsoon. By habka, by Easter waxaa jiri doona qiimo dhimis ilaa Abriil 22, oo leh qiimo dhimis 50% ah dukaanka Valve ee Steam. Waad ka faa'iideysan kartaa fasaxan oo waxaad heli kartaa Dungeons iyo dhammaan xirmooyinka dheeraadka ah ee la heli karo xilligan ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » Dungeons 3: ciyaar fiidiyoow oo weyn oo loogu talagalay Linux
Siidaayay nooca cusub ee SQLite 3.28 oo leh waxqabad sare iyo inbadan